Diniho avy eo ny paikadinao bitika. Inona ny tetika hifandray amin'ireo prospect-nao sy ny mpanjifanao amin'ny fomba hanomezan-dry zareo hoot anao? Ahoana no hahalalanao raha mahomby amin'ny fahombiazana ianao? Misy fantsona mora raisinao ho anao fa mila mifanaraka? Ahoana no ahafahanao mampifandray ny hafatrao sy ny sarinao amin'ny fikitika rehetra anao?